ကွားသိသမြှ Archives - Page 39 of 39 - Myanmar Thadin
December 26, 2020 December 13, 2020 by Myanmar Thadin
မလှောင်ပါနဲ့သားရယ်ရှက်စရာမဟုတ်ပါ ဝေးလံခေါင်သီတဲ့ ဒေသကနေ ဘုရားလာဖူးတဲ့ အဘွားတွေကို လူငယ်တစ်ယောက် ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီး မစူးစမ်းမဆင်ခြင်ဘဲ Onlineပေါ် တင်လိုက်တယ် သူတင်လိုက်တဲ့ပုံက ခဏအတွင်းမှာပဲ ပြန့်သွားပြီး တစ်ချို့က လှောင်ကြ တစ်ချို့က မလှောင်သင့်ကြောင်းပြောကြတာပေါ့။ ဒါကို အဲ့ဒီလူငယ်က မသိသေးပါဘူးအဲ့ဒီနောက် အဘွားတွေရှိရာကို သွားပြီး အဘွားတစ်ယောက်ကို သွားမေးတယ် လူငယ် ဘွားဘွား တစ်ခုလောက်မေးပါရစေ? ဘွား> ရပါတယ် မေးပါ သား လူငယ် ဘွားဘွားတို့က ဘုရားဖူးလာတာဆိုရင် ဘာဖြစ်လို့ဝတ်ကောင်းစားလှ ဝတ်ပြီး မလာကြတာလဲ? သားတို့ မြို့ကြီးက လူတော်တော်များများက ဘုရားဖူးသွားကြရင် ဝတ်ကောင်းစားလှတွေ ဝတ်ကြတယ် ဘွား ဒီလိုကွဲ့သား အဘွားတို့က ဘုရားကို ဖူးဖို့ပဲလာတာ ဘုရားဖူးဖို့. ဝတ်ကောင်းစားလှတွေဝတ်မှ ဖူးရမယ်လို့ ဘုရားကဟောလို့လားသား အဓိကက စိတ်ပဲသားရဲ့ ဘွား … Read more
ပြန်တွေ့ပြီဖြစ်တဲ့ မိန်းကလေး၂ ဦး မှ နတ်တွေ ခေါ်သွားတဲ့နေရာကို ပြန်သွားရမယ်လို့ မကြာခဏ ပြောဆိုနေ
December 10, 2020 by Myanmar Thadin
ပြန်တွေ့ပြီဖြစ်တဲ့ မိန်းကလေး၂ဦး မှ နတ်တွေ ခေါ်သွားတဲ့နေရာကို ပြန်သွားရမယ်လို့ မကြာခဏ ပြောဆိုနေ တအာင်းပလောင်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ နမ့်ဆန်မြို့နယ် လုံတောက်ကျေးရွာက အသက် ၁၆ နှစ်အရွယ် လွေးလဲ့လဲ့ဦးနဲ့ လွေးယဉ်ယဉ်ထွေးတို့ ၂ ဦးဟာဒီဇင်ဘာလ ၆ ရက် မနက် ၅ နာရီမှာ ကျေးရွာရှိ နေအိမ်ကို ပြန်လည်ရောက်ရှိလာတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒီနေ့ ဒီဇင်ဘာ ၉ ရက် မနက်မှာ လွေးလဲ့လဲ့ဦးနဲ့ လွေးယဉ်ယဉ်ထွေးတို့ ၂ ဦးရဲ့နေအိမ်သို့ ရပ်ရွာလူကြီးတွေကို ခေါ်ပြီး အလှူတွေ လုပ်ပေးခဲ့တယ်လို့ ၎င်းက ဆိုပါတယ်။ လုံတောက်ကျေးရွာခံတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ကိုဘဆွေက သူတို့ ဗေဒင်ဆရာတွေကို အကူညီတောင်းပြီး အိမ်မှာ ခေါ်ထားလိုက်တယ်။ သူတို့နှစ်ယောက်လည်း ဟိုဘက် ပျောက်တဲ့နေရာ ပြန်သွားရမယ်လို့ ခဏခဏပြောတယ်။ မိဘတွေလည်း … Read more
ဆိုင်ကယ်မောင်းနှင်လာသူ အမျိုးသမီးတဦးအား ပြန်ပေးဆွဲမှုဖြစ်ပွါး
December 6, 2020 by Myanmar Thadin
ယနေ့ ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း မူဆယ်မြို့ စွမ်ဆော် ခူးဝိန်းရပ်ကွက်မှာ အမည်မသိအမျိုးသား ၂ ဦးမှကားဖြင့်ရပ်စောင့်ကာ ဆိုင်ကယ်မောင်းနှင်လာသူ အမျိုးသမီးတဦးအား ပြန်ပေးဆွဲမှုဖြစ်ပွါး Credit Video – Chan Thar SiThuMaung unicode ယနေ့ ရှမျးပွညျနယျမွောကျပိုငျး မူဆယျမွို့ စှမျဆျော ခူးဝိနျးရပျကှကျမှာ အမညျမသိအမြိုးသား ၂ ဦးမှကားဖွငျ့ရပျစောငျ့ကာ ဆိုငျကယျမောငျးနှငျလာသူ အမြိုးသမီးတဦးအား ပွနျပေးဆှဲမှုဖွဈပှါး Credit Video – Chan Thar SiThuMaung
ဆိုင်ရှင် ဒဏ်ရိုက်တာ ကိုခံပြီး ကိုယ်လက် မသန် စွမ်းတဲ့ ကောင်လေးကို ခေါက်ဆွဲ ခွံ့ကျွေးခဲ့တဲ့ စာပွဲထိုးလေး
December 2, 2020 by Myanmar Thadin
ဆိုင်ရှင် ဒဏ်ရိုက်တာ ကိုခံပြီး ကိုယ်လက် မသန် စွမ်းတဲ့ ကောင်လေးကို ခေါက်ဆွဲ ခွံ့ကျွေးခဲ့တဲ့ စာပွဲထိုးလေး မလေးရှား လမ်းဘေးစားသောက်ဆိုင် တစ်ဆိုင်မှာ ခေါက်ဆွဲ လာစားတဲ့ ကိုယ်လက် မသန်စွမ်းတဲ့ ကောင်လေးကို ဆိုင်မှာအလုပ် လုပ်တဲ့ စားပွဲထိုး ကောင်လေးက အစာခွံ့ကျွေး ပြီးနောက်မှာတော့ ဒီပုံရိပ်လေးဟာ အွန်လိုင်းမှာ ပြန့်နှံ့ခဲ့ပြီးအင်တာနက် သူစွဲသူတွေကို ကြည်နူးမှု ဖြစ်ပေါ်စေ ခဲ့ပါတယ်။ ဒီသတင်းဟာ အလျင်အမြန်ပဲ လူ မှုကွန်ယက်မှာ ပြန့်နှံခဲ့ပြီး ထိမိတဲ့ ဒီပုံရိပ်လေးကို Facebook မှာ မျှဝေသူ အများအပြား ရရှိခဲ့ပါတယ်။ Andy Lau ဆိုတဲ့ လူတစ်ဦးက အဆိုပါဆိုင်မှာ လာစားရင် ထိုမြင်ကွင်းကို သဘောကျလို့ ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီး အွန်လိုင်းမှာ မျှဝေပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ … Read more
ကလေးငယျလေးရဲ့ အသကျကို နှုတျယူသှားတဲ့ အင်ျကြီက ရှကွေယျသီးလေး
December 1, 2020 by Myanmar Thadin
ကလေးငယျလေးရဲ့ အသကျကို နှုတျယူသှားတဲ့ အင်ျကြီက ရှကွေယျသီးလေး ရှကွေယျသီးလေး နှငျ့ ကလေးတို့ အန်တရာယျ ရေးသားသူ – ဒေါကျတာသကျထားရှစေငျဝငျး ”ဆရာမရယျ ကြှနျမသားလေးကို ကယျပါဦး”ကလေး မကျြစိထဲ ဓာတျမီးနဲ့ ထိုးကွညျ့ပွီး ပွနျအလှညျ့မှာ ကလေးအမရေဲ့ ငိုသံစှကျနတေဲ့စကားကွောငျ့ သကျပွငျးခိုးခလြိုကျမိတယျ။ ကလေးရဲ့ သူငယျအိမျက တုနျ့ပွနျမှုမရှိ … ကယျြနှငျ့ပွီ။ ကလေးရဲ့ ဦးနှောကျက သနှေငျ့ပွီ ဆိုတဲ့အကွောငျး ဘယျလိုအငျအားနဲ့ ရှငျးပွရပါ့။ ခုနျပေါကျပွေးလှားဆော့ကစားနတေဲ့ သားဖွူတုတျလေး နာရီဝကျလောကျအတှငျး ဒီလိုအဖွဈဆိုးမြိုးကွုံရမယျလို့ ဒီအမေ ဘယျထငျမိပါ့မလဲ။ တရားခံက သိပျလှတဲ့ ”ကွယျသီးလေးတလုံး”ကလေးအမကေ အဝတျလြှျောနခေဲ့တယျ။ ဧညျ့ခနျးထဲမှာ သားကလေး ကစားနတေယျ။ အဝတျလြှျောခါနီး အဖလေုပျသူရဲ့ ရှပျအကြီင်ျက ရှကွေယျသီးလေးကို အမကေ တီဗီစငျပျေါ တငျထားလိုကျတယျ။ ခဏနတေော့ ကလေးက … Read more
(၂၂)ကွိမျမွောကျ အောငျဘာလေ သိနျးဆု ဖှငျ့ပှဲ တိုကျရိုကျထုတျလှငျ့ခွငျး
(၂၂)ကွိမျမွောကျ အောငျဘာလေ သိနျးဆု ဖှငျ့ပှဲ တိုကျရိုကျထုတျလှငျ့ခွငျး အားလုံးကံကောငျးကွပါစေ။ လှပတဲ့ဒီဇငျဘာလလေးမှာ ကံကောငျးခွငျးတှယေူဆောငျလာကွပါစေ။ ဆုမှနျကောငျးတှတေောငျးရငျး ဒီပို့လေးကိုရှဲသှားပါ။ unicode (၂၂)ကြိမ်မြောက် အောင်ဘာလေ သိန်းဆု ဖွင့်ပွဲ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ခြင်း အားလုံးကံကောင်းကြပါစေ။ လှပတဲ့ဒီဇင်ဘာလလေးမှာ ကံကောင်းခြင်းတွေယူဆောင်လာကြပါစေ။ ဆုမွန်ကောင်းတွေတောင်းရင်း ဒီပို့လေးကိုရှဲသွားပါ။
တောငျကွီးတက်ကသိုလျရှိ နနျးဝတီ အမြိုးသမီးအဆောငျတှငျ Quarantine ဝငျနသေော အမြိုးသမီး တဈဦး အဓမ်မပွုကငျြ့ခံရဟုဆို
November 30, 2020 by Myanmar Thadin
တောင်ကြီးတက္ကသိုလ်ရှိ နန်းဝတီ အမျိုးသမီးအဆောင်တွင် Quarantine ဝင်နေသော အမျိုးသမီး တစ်ဦး အဓမ္မပြုကျင့်ခံရဟုဆို တောင်ကြီးတက္ကသိုလ်ရှိ နန်းဝတီ အမျိုးသမီးအဆောင်တွင် Quarantine ဝင်နေသော အမျိုးသမီး တစ်ဦး နိုဝင်ဘာလ ၂၉ ရက်၊ ညပိုင်းက အဓမ္မပြုကျင့်ခံရကြောင်း တောင်ကြီးမြို့မရဲစခန်းမှ စုံစမ်း သိရှိရသည်။ အဆိုပါ တောင်ကြီးတက္ကသိုလ်ရှိ နန်းဝတီ အမျိုးသမီးအဆောင်တွင် အဓမ္မပြုကျင့်ခံရသော အမျိုးသမီး ဘုရား ဝတ်ပြုနေစဉ် အမည်မသိအမျိုးသားတစ်ဦးမှ ဓါးကိုင်ဆောင်၍ လည်းပင်းကိုထောက်၍ ခြိမ်း ခြောက်ကာ အဓမ္မပြုကျင့်သွားခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ “အခုလောလောဆယ် တောင်ကြီး တက္ကသိုလ်ထဲမှာ အမျိုးသမီးကို လူခွဲပြီး စစ်ဆေးနေတုန်းပါ။ တရားခံတော့ အခုထက်ထိဖမ်းမမိသေးပါဘူး။ အမှုမှန်ပေါ်ရင်တော့ တရားဝင် ထုတ်ပြန်ပေးပါမယ်” ဟု အဆိုပါစခန်းရှိ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးကဆိုသည်။ ကျူးလွန်သူမှာ သားမသားအဖြစ်ပြုကျင့်ပြီးနောက်ထွက်ပြေးစဉ် အခြားအခန်းမှ … Read more
LIVE လွှင့်ပြီး ကြိုဆွဲချနေသလို စနောက်ပြရင်းကနေ တကယ်မသာပေါ်တော့မလို ဖြစ်သွားတဲ့ကောင်မလေး (ရုပ်သံ) ရှေးလူကြီးတွေပြောတာအိမ်မှာကြိုးတန်းလန်းမထားကောင်းဘူးဆိုတာ အခုသဘောပေါက်ပါတော့တယ်… အိမ်မှချထားတဲ့ ကြိုးတန်းကို Live လွှင့်ပြီး ဆွဲကြိုးချသလို လုပ်ပြရင်း အမှန်တကယ် ဆွဲကြိုးချသေသလို ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဗွီဒီယိုလေးပါ။ ဗွီဒီယိုဖိုင်ကို အောက်ဆုံး မှာဖော်ပြပေးထားပါတယ်…။ တကယ်ဆို ဒီဗီယိုမှာ ကောင်မလေးက သူငယ်ချင်းတွေ ကြည့်ရှု့သူတွေကို ကြိုးဆွဲချသေသလို LIVE လွှင့်ပြီး လုပ်ပြချင်တာပါ အဲဒါ ကမြင်းကြောထရင်း တကယ်ကွင်းစွတ်ပြီး မသာပေါ်တော့မလိုဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်… တော်သေးတာပေါ့ အော်ပြီးတော့ အကူအညီတောင်းနိုင်သေးလို့ မဟုတ်ရင် ကွင်းစွတ်ပြီ … ဟိုတနေ့ကလဲ မမနန်းဆုက LIVEလွှင့်ပြီး ကာလာတေလာပြသွားတယ် မကြည့်တော့ပါဘူးဆိုပြီး ခဏ ခဏ ပြန်ကြည့်မိသွားတယ် ဘာမှလဲမဟုတ်ဘူး ဒီဗီယိုကို ကြည့်ပြီး သင်ခန်းစာယူစရာတွေလဲ အများသား ပျော်လို့စရင်းနောက်ရင်း … Read more